८२ डीएसपीको सरुवा, को–कहाँ? (सूचीसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
८२ डीएसपीको सरुवा, को–कहाँ? (सूचीसहित)
काठमाडौं, फागुन २० । नेपाल प्रहरीका ८८ प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) को सरुवा गरिएको छ । आईजीपी सर्वेन्द्र खनालको आइतबारको निर्णयअनुसार ८२ डीएसपीको सरुवा गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
जसअनुसार अनन्त राम शर्मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा सरुवा भएका छन् । यस्तै अपिल राज बोहरा महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर, दीपेन्द्र शाह जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा सरुवा भएका छन् । यस्तै फणिन्द्र महानगरीय प्रहरी बृत्त महाराजगन्ज, श्यामबहादुर खत्री जिल्ला प्रहरी कार्यालय जाजरकोटमा सरुवा भएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस एसएसपी बढुवाको कानूनी बाटो खुल्यो, ३३ जना एसपी प्रतिस्पर्धामा
सरुवाको सूची हेर्नुहोस्ः
ट्याग्स: Nepal police